အထက်မြန်မာပြည်မှ တဦးထဲသော Top 10 ဝင်သူ မောင်ချစ်ထွန်းနိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - News @ M-Media
in ထူးချွန်လူငယ် — June 21, 2016
ဇွန် ၂၂ ၊ ၂၀၁၆
၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ က ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ (၆၃၆,၂၃၇) ဦးရှိပြီး (၁၉၀,၃၈၈) ဦးအောင်မြင်ခဲ့ရာ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း (၂၉.၉၂) % ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အောင်မြင်သူများ အနက် သိပ္ပံဘာသာတွဲတွင် တနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံး (၁၀) ဦးတွင် အမှတ်ပေါင်း(၅၅၅) မှတ်ဖြင့် နဝမ အဆင့်(၉) ရရှိခဲ့သော မောင်ချစ်ထွန်းနိုင်ကို M-Media မှ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
သိပ္ပံတွဲ အမှတ်အများဆုံး ၁၀ ဦး တွင် ရန်ကုန်တိုင်းမှ ၉ ဦးပါဝင်ခဲ့ပြိး မောင်ချစ်ထွန်းနိုင်တဦးသာ မန္တလေးတိုင်းမှ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
M-Media- ညီလေး နာမည်နဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်လေးကို ပြောပြပေးပါ။ မိဘတွေရဲ့ အမည်နဲ့ မွေးချင်းမောင်နှမ ဘယ်၂ ယောက်၇ှိပါလဲ။
ဖြေ။ ။ မောင်ချစ်ထွန်းနိုင် ၂၃-၁၂-၁၉၉၉ မှာ မွေးပါတယ်။ အဖေနာမည်က ဦးသန်းထွန်း နဲ့အမေနာမည်ကတော့ ဒေါ်သီတာပါ ညီမတစ်ယောက်ရှိပါတယ် မောင်နှမနှစ်ယောက်ပါ။
M-Media- ၁၀ တန်းမှာ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်း အမည်လေး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ . CAE ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းပါ (The Conqueror Academy of Education )
M-Media- ညီလေးက ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးရဖို့ အစကတည်းက ရည်မှန်းထားပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အစကတည်းက ရည်မှန်းထားခဲ့ပေမယ့် လူသားဆိုတာ ဘာမှမစွမ်းနိုင်ဘူး ဘုရားသခင်ရဲ့ အစီအမံ ကံတရားကိုတော့လက်ခံရမှာပဲ ဆိုတဲ့ခံယူချက် မျိုးတော့ထားပါတယ်။
M-Media- အမှတ်စာရင်းတွေရော သိရပြီလား။ နည်းနည်းလောက် ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ မြန်မာစာ ၇၅
အမှတ်ပေါင်း ၅၅၅ မှတ်ပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲမှာ သိပ္ပံတွဲ တနိုင်ငံလုံး အမှတ်အများဆုံးမှာ နံပါတ်(၉) ရပါတယ်။
M-Media- Top 10 ဝင်တဲ့ ခံစားမှုလေး ပြောပြပေးပါအုံး။
ဖြေ။ ။ ဘဝရဲ့ အချိုးအကွေ့ တစ်ခုမှာ ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။
M-Media- စာကျက်နည်းလေးကိုလေး မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် မျှဝေပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ စာကျက်နည်းကတော့အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး ခြောက်ဘာသာရတဲ့ Top ten ရတဲ့သူတွေဟာလည်း သာမန်လူတွေပါပဲ အဓိကအချက်ကတော့ ကြိုးစားဖို့ ပါပဲ တစ်နေ့ ကို ၆ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ချိန်ထားပါတယ် အားလပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ် စာကျက်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မရွေး စာလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ကျက်စာ ငြီးငွေ့ ရင် တွက်စာ တွက်စာငြီးငွေ့ ရင်ဖတ်စာ ဆိုပြီး ပြောင်းပြောင်းလုပ်ရင် စာလုပ်ရတာ မငြီးငွေ့ တော့ပါဘူး စာကျက်နည်းရယ်လို့တော့ လျှို့ ဝှက်ချက်ကြီးရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး အချိန်ကိုစက္ကန့်နဲ့ အမျှတန်ဖိုးထားနိုင်ရင် သေချာပေါက်အောင်မြင်မှာပါ။
M-Media- ၁၀တန်း မတိုင်ခင် ပညာရေးအခြေအနေနဲ့ ကျောင်းမှာ ထူးချွန်မှုလေးတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ အတန်းစဉ်လိုက်မှာ ပထမတွေချည်းပဲတော့မဟုတ်ပေမယ့် နှစ်စဉ် ထူးချွန်ဆုတွေ ရခဲ့ပါတယ် ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကတော့ အဋ္ဌမတန်းမှာ မန္တလေးတိုင်း သင်္ချာထူးချွန်တတိယနဲ့နဝမတန်း တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် သင်္ချာအိုလံပစ် ဒုတိယဆုရခဲ့ပါတယ်။
M-Media- အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ။ ဘယ်တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ဖို့ စဉ်းစားထားပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကတော့ ကွန်ပျူတာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ် တက္ကသိုလ်ကတော့ Y.I.T မှာ အဆောင်နေပြီး နေဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
M-Media- ကျောင်းစာ အပြင် တခြား ဝါသနာပါတာ ဘာတွေ ၇ှိပါလဲ။
ဖြေ။ ။ တခြား ဝါသနာပါတာကတော့ စာဖတ်တာပါပဲ ဒီဝါသနာကပဲ ကျောင်းစာကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
M-Media- ညီလေး ရဲ့ Role Model ဘယ်သူပါလဲ။
ဖြေ။ ။ လူ့ အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှု ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုတွေကို တိုက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ လူ့လောကကြီးအတွက်ပဲ အကျိုးပြုကြောင်းကို ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်ပုံနဲ့ ပါ သက်သေပြခဲ့တဲ့ မဟတ္တမဂန္ဓီပါ။
M-Media- အခု Top 10 ဝင်တယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံတော်က ဆုတွေဘာတွေ ချီးမြှင့်ဖို့ ဆက်သွယ်လာပြီလား
ဖြေ။ ။ . အောင်စာရင်းထွက်တာ မကြာသေးတော့ မဆက်သွယ်လာသေးပါဘူး
M-Media- ထူးချွန်လူငယ်တယောက် အနေနဲ့ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ ဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးကနေ ပါဝင်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါသလဲ။
ဒီ IT ခေတ်ကြီးမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ နည်းပညာပိုင်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
M-Media- နောက်ပြီး ညီငယ်က မွတ်စလင်မ် တယောက်ဖြစ်တာမို့ အဘက်ဘက်က အားနည်းနေတယ့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဘယ်လို ပါဝင်တည်ဆောက်သွားဖို့ စိတ်ကူးထားပါလဲ ။
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့လို့ ၁၆နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြေရခက်တဲ့မေးခွန်းပါပဲ မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်တဲ့ ပညာနဲ့မြန်မာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ အစည်းရဲ့လိုအပ်တဲ့ပညာရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စတွေမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်တည်ဆောက်သွားပါမယ်
Tags: Muslims Youth, ထူးချွန်မွတ်စလင်မ်လူငယ်